Karoona oo Kusoo Laba Kacleynaya Soomaaliya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Karoona oo Kusoo Laba Kacleynaya Soomaaliya.
On Jul 12, 2021 206 0
Cudurka Karoona ayaa wali ka jira dalka Soomaaliya kaasoo ay dadka qaar u dhintaan kuwa kalana ay ka bogsadaan.
Inkastoo badi dadku aysan tagin goobo caafimaad oo ay iskood iskula tacaalaan iyagoo ka baqaya in la karaantiilo ayaa haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in tirada bukaanada ay soo kordheyso.
Dowladda Federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa soo saartay kiisaskii ugu dambeeyay ee laga helay Soomaaliya ee cudurka Karoonaha, waxaana wasaaradadeeda caafimaadka laga soo xigtay in cudurka uu ku dhacay 41 ruux muddo 24 saac gudahood ah.
Waxaa 72- saac gudahood cudurka laga helay 41 ruux kadib baaritaano lagu sameeyay 3,883 ruux oo Soomaali ah iyadoo aysan jirin cid baari karta ciidamada shisheeye iyo hey’adaha faraha badan ee dhooban magaalooyinka qaar.
Haddaba dadka ugu badan ee laga helay cudurka Covid 19 ayaa ku sugan Puntland halkaasoo 24 saac gudahood laga helay 22 ruux, Muqdisho waxaa laga helay 7 ruux, Kismaayo 7 ruux, halka Somaliland laga helay 5 ruux iyo 2 kale oo u dhimatay.
Dowladda Federaalka ayaanan warbixinteeda ku sheegin xaaladda cudurka ee maamulada Baydhabo, Jowhar iyo Dhuusomareeb.
Soomaaliya waa wadan aan ka xadidnayn isku socodka iyo ajaanibta waxaana waxanka har iyo habeenba soo gala kana baxa diyaarado sida ajaanib iyo dad kale oo ka tirsan DF, waana sababta keeneysa in cudurka Karona uu soo laba kacleeyo.